Yemahara software vs. yakavhurwa sosi: aka GPL vs. BSD | Linux Vakapindwa muropa
Vazhinji vanotozviziva izvozvo yemahara software uye yakavhurika-source (yakavhurwa sosi) haina kufanana, asi kunyangwe isu vedu vanoiziva dzimwe nguva vanoishandisa sechifananidziro uye haina kunyatsoita. Pane mimwe misiyano inofanirwa kujekeswa.
Kunyangwe pazviitiko zvese izvi zviri zve software (isu taonawo kuti uzivi uhwu hwasvetukira mu Hardware uye kunyangwe zvimwe zvikamu) zvinopa dhairekodhi Kugona kuona kugadzirwa kwayo uye zvazvinoita, hazvisi zvese zvakafanana. Isu tinoziva zvakare kuti yemahara software ndeye mahara uye kuti yakavhurwa sosi mapurogiramu kana anoshanda masystem ndeayo mazhinji chikamu futi.
Kana ari kubudiriraMuzviitiko zvese izvi, kodhi inogona kushandurwa kana kuvandudzwa uye kushandiswa "zvakasununguka". Zviripachena iwe unenge uchifunga kuti yemahara software zvakare yakavhurwa sosi uye iwe uri chokwadi chaizvo. Neichi chikonzero, isu tinofanirwa kutaura nezve marezinesi, pane kusununguka vs. open-source software. Saka ndeupi musiyano?
Kuti upindure mubvunzo wapfuura tinogona kuongorora maviri emarezinesi ane mukurumbira munzvimbo ino, BSD uye GPL. Iyo BSD rezinesi iri rezinesi rekubatanidza yakavhurika sosi software uye kunyangwe izvo vazhinji vanofunga kuti zvakanyanya kubvumidza kupfuura GPL. Asi kuregerera dzimwe nguva kune mhedzisiro yakakomba.
Hatisi kuzopinda mumashoko ekutsanangura izvo GPL neBSD zvine, nekuti tinogona kuwana zvemukati zvezvinyorwa zvinoverengeka, asi isu tinosimbisa iyo yakakosha pfungwa. Kunyange software iri pasi pe GPL rezinesi inogona kuchinjwa uye kugoverwa chero bedzi ichiramba iri yemahara, software iri pasi pezenisi reBSD inogona kuchinjwa uye kugoverwa patsva pasi peimwe rezinesi (kusanganisira iyo ye yakavharwa kodhi).
Naizvozvo, hakuzovi ne “Linux"Yakavharwa sekunge kune"BSD”Yakavharwa (Mac OS X)… Pakupedzisira zvandinoreva ndezvekuti software yemahara ichagara yakasununguka, asi sosi yakavhurika rimwe zuva inogona kusangana nechinhu chinotemerwa kumeso patinoyedza kubata kodhi yekodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Yemahara vs Open-sosi software: haina kufanana
Kungoita kuti software iri pasi peGPL rezinesi hazvireve kuti inofanira kunge iri yemahara. Ini ndinogona kukudziridza kunyorera, kuzviisa kune iro rezinesi uye sekugona kwandingaite ndisiye mahara, ini ndinogonawo kubhadharisa iyo, uye nekuda kwechikonzero icho haina kumira kuva GPL. Izvo chaizvo zviri pagirafu. Ndinogona kuitengesa kana ndichida.
Nguva zhinji nyonganiso inounzwa neshoko kuChirungu .. Mahara software, imwe yazvinoreva zvemahara mahara.
Pindura kuna Alexb2020
Mhoro. Ehe zvaunotaura ndezvechokwadi zvachose. Muchokwadi, vatauri veChirungu vanowanzo shandura izwi rekuti "mahara" kuenda "mahara" nekuti harishamisi. Kusununguka muChirungu kunogona kureva zvese zvemahara uye zvemahara, asi mahara software haigare iri yemahara ndosaka vachidaidza kuti "mahara software" kusiyanisa. Kana mapurogiramu emahara haafanire kuve akasununguka kana akavhurwa sosi, kune mazhinji emahara ekurodha mapurogiramu akavharwa.